Operation Vhidhiyo Download
Ndeupi musiyano uripo pakati pe LED kupikicha mwenje uye kupenya?
Kutora mifananidzo kunoshandisa mwenje nemumvuri kupenda, uye kutonga kwakanaka kwechiedza kunovhenekera kosi yevanotora mifananidzo. Mazuva ano, kuwedzera kune echinyakare kupenya, kune mamwe anotakurika ruoko-akabata mwenje mwenje. Zvichienzaniswa nemwenje, iyo LED yekuzadza mwenje iri nyore uye iri nyore kune ...Verenga zvimwe »
Chiedza chinokuvadza ganda here?
Ganda revanhu rakanyanya kusimba. Nekuti munzvimbo yakasikwa senyika, ganda rinogona kubatsira vanhu kuvhara mabhakitiriya ekunze nemavirusi. Uye zvakare, inogona zvakare kubatsira munhu wese kuvhara ese marudzi emwaranzi kubva muchadenga. Kunyangwe zvakadaro, isu vanhu tinofanirwa kudzidza kuchengetedza ganda redu, kunyanya kune wome ...Verenga zvimwe »
Chiedza chena chiri nani kana mwenje inodziya iri nani kune maziso?
Kana mwenje muchena muhofisi panzvimbo yebasa wakanaka kumeso, zvirinani kuve nemwenje unodziya mumba yekurara kumba. Chiedza chinodziya chiri padyo nechiedza chemasikati, kupa kweruvara kuri nani, uye chena mwenje unotonhorera. Sarudzo yechiedza inoenderana nekara tembiricha ukoshi: Simply put, th ...Verenga zvimwe »
NZIRA YOKUTANGA KUFAMBA KUBVA MUMBA
Iye zvino kupfuura nakare kose, zviri nyore kwazvo kutanga kutenderera zvirimo, kunyangwe zviri zvinyorwa zvevhidhiyo, mitambo yemavhidhiyo playthroughs, kana chimwewo chinhu zvachose. Ndosaka zvakakosha kuti uzive maitiro ekuzvitsaura kubva pamakwikwi. Aya matanho ekuti ungatanga sei kutenderera uchibva kumba kunobatsira yo ...Verenga zvimwe »
Ndeupi musiyano uripo pakati pekuzadza mwenje uye kupenya
Iko kupenya inguva diki; mwenje wekuzadza unogona kuramba uchipenya semwenje we fluorescent. Chiedza chekuwedzera: Icho chinonzi mwenje wekuwedzera rudzi rwemwenje unoshandiswa kubhadhara chimwe chishandiso kana zvirimwa nekuda kwekushaikwa kwechiedza. Parizvino, panowanzo kuve nemhando nhatu dze ...Verenga zvimwe »
Rudzii rwechiedza rwakakodzera kuona? Ndezvipi zvinodiwa zvemwenje?
Marambi akanakira kuona anosanganisira mwenje yekupisa yemagetsi, mwenje yekuwandisa-mwenje, mwenje yedhesiki reLED, uye marambi ekudzivirira maziso eDC. Zvinoda mwenje 2. Ruvara ...Verenga zvimwe »
Ndezvipi zviri nani pane zvinoitika zvekuzadza mwenje uye kupenya?
Ndeupi musiyano uripo pakati pekuzadza mwenje uye kupenya Iko kupenya ingori kwenguva pfupi; mwenje wekuzadza unogona kuramba uchipenya semwenje we fluorescent. Yakawedzera mwenje: Iyo inonzi yekuwedzera mwenje rudzi rwemwenje unoshandiswa kubhadhara mwenje wemimwe michina kana zvirimwa nekuda kwekushayikwa o ...Verenga zvimwe »
Mashandisiro ekuzadza mwenje kuti uwane zvaunoda iwe
Mazuva ano, makamera etsvarakadenga, PS uye zvimwe software zvinogona kutiita kuti titaridzike zvakanakisa hazvisisina kukwana kuzadzisa zvido zvedu. Saka ikozvino kana vanhu vatora mifananidzo, vanogara vachifarira kubata iwo ekuzadza mwenje kuti vagadzire chaicho chinhu mukufamba kwekutora mifananidzo. Kukanganisa kwaro. Iko kuzadza l ...Verenga zvimwe »
Ndeupi musiyano uripo pakati pemwenje yeLEM uye mwenje mwenje?
1. Musiyano uripo pakati pemarambi eLED nemwenje zvakajairika ndewekuti: 1. Kupenya kwacho kwakapetwa ka3 pane emwenje anochengetedza magetsi uye ka7 mwenje yemwenje. 2. Simba rekuchengetedza, N nguva dzekuchengetedza magetsi pasi pekupenya kwakafanana 3. Hupenyu hwakareba, Chechipiri, zvakanakira LED hama ...Verenga zvimwe »
Ndeupi musiyano uripo pakati pe LED photog ...
Photography inoshandisa mwenje nemumvuri kupenda, uye inoshanda kutonga kwechiedza sosi ndeye compul ...
Ganda revanhu rakanyanya kusimba. Nekuti munzvimbo yepanyama senyika, ganda anogona ...
Chiedza chena chiri nani kana kudziya mwenje chiri ...
Kana mwenje chena muhofisi panzvimbo yebasa yakanaka kumeso, zvirinani kuve ne ...
Iye zvino kupfuura nakare kose, zviri nyore kwazvo kutanga kutenderera zvirimo, kunyangwe ari mavhidhiyo anotsanangura, ...
Ndeupi musiyano uripo pakati pekuzadza mwenje ...
Iko kupenya inguva diki; mwenje wekuzadza unogona kuramba uchipenya semwenje we fluorescent ...
Chiedza chesimbi, Rgb Led Panel, Akatungamirira Flat Panel Light yechigarire, Vhidhiyo Musangano Mheni, Chiedza Panel Vatengesi, Mhete Yakatungamirwa Chiedza Yekutora Mifananidzo,